Plume Upright Piano Manufacturer - Sina Plume Upright Piano Factory & mpamatsy
Ny fahatsapana ny siansa sy ny teknolojia no mpitatitra zavakanto mampiseho ny olona maniry fatratra ny ho avy. Plume Intelligent Piano, dia ny mahatsapa ny sary amin'ny fahatsapana ny siansa sy ny teknolojia. Avy amin'ny fiovan'ny fahatsapana ka hatramin'ny fanitarana ny saina, ankehitriny, Plume Intelligent Piano dia lasa fironana tsy azo ihodivirana amin'ny mozika. Ny andian-dahatsoratry ny Plume Piano, mahatonga ny olona tia mozika afaka mahatsapa ny fikasihana sy ny tanjaka avy amin'ny fony amin'ny fomba fijery samihafa. Toy ny tsy mbola fahita. Andao isika hanafaka miaraka.
Bach, Mozart, Chopin, Liszt… nataon'izy ireo nihira ny hira tsirairay. Plume Piano, tsy manana fahatsapana poetika ihany, fa koa ny vokam-peo maoderina, mahazo aina ary tonga lafatra. 'Mpihira' dia tian'ny mpitendry mozika foana. Tiany tsirairay ireo naoty tsara tarehy lasa feon-kira manerantany.
Ity sangan'asa ity dia antsoina hoe Plume YY-DJ02. Miaraka amin'ny fitaovana avo lenta ho an'ny PVC hiditra ao amin'ity fitaratra ity toa ny tampon'ny mainty tsara tarehy, ny zava-drehetra dia nijery voalanjalanja sy kanto tokoa. Rehefa jerenao dia mety ho toy ny sangan'asa kanto ihany io, mihoatra ny piano fotsiny, zavamaneno.
Piano dia tia ny fiainana, dia hady tsy misy fiafarany. Ny Master, manomboka amin'ny bokotra iray dia afaka mampandihy ny rantsan-tànana amin'ny klavier mahafinaritra, noho ny 'chip' ao anatiny no andao antsika hahatsapa ny feon'ny 'Master'. Aorian'ny famaizana dia amporisiho am-ponao ilay fiainana mahafinaritra.
Piano mandeha amin'ny herinaratra, Piano nomerika lafo vidy, Fanamboarana Piano Digital, Kitendry Piano Smart, Electric Grand Piano, Piano Digital Upright,